Archive du 20180315
Fitantanana sy diplomasia Aotra ny naotin’ny mpitondra
Tsy mora ny mitondra firenena. Matoa anefa miditra eo dia mila mahavita fa tsy lany andro miala bala toy ny ataon’ny fanjakana HVM.
Fitondrana Rajaonarimampianina Manandran-doza miady amin’ny fitsarana
Tany amin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy no efa nanomboka ny disadisa teo amin’ny fanjakana HVM sy ny mpitsara Malagasy. Nitohy tamin’ny raharaha Houcine Arfa, ny fisamborana mpitsara noho iny raharaha Houcine Arfa iny, ny fanesorana ny tonia mpampanoa lalàna ambony Rakotonavalona Ranary Robertson,…
Andriamanampisoa Gégé Bosco Miverina amin’ny politika
Rehefa nanao ny tsy nambinina tamin’ny fifidianana depiote tamin’ny taona 2013 natrehany tany Mananjary Atoa Andriamanampisoa Gégé Bosco ka nirona tanteraka tamin’ny fitantanana rafitra fanatanjahantena taorian’izay,
Fiarahamiasan’ny CUA sy Ministeran’ny Fanabeazana Atao sekoly modely ny EPP Soarano
Vita sonia tetsy amin’ny EPP Soarano ny alarobia 14 martsa 2018 ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin’ny Ministera misahana ny Fanabeazam-pirenena tamin’ny alalan’ny Tale Jeneralin’ny Fanabeazam-pirenena Todisoa Andriamampandry sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra tamin’ny alalan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana .
Zanaray Miraindraiky Ny firaisankinan’ny Antesaka no laharam-pahamehana
Fahombiazana ! Izay raha fehezina ny fihaonana voalohany ho an’ny taona 2018 ho an’ireo terak’Antesaka mivondrona ao anatin’ny fikambanana Zanaray Miraindraiky teny amin’ny CNaPS Vontovorona.
Taom-baovao Malagasy Iray ihany, hoy Rakoto David
Iray ihany ny taom-baovao Malagasy, hoy Rakoto David, tompon’andraikitra eo anivon’ny hadivory fito sosona ao anatin’ny trano koltoraly Malagasy fa ny mpikarakara no samihafa.
Tsy fandriampahalemana Leo vahaolana petatoko ny Malagasy
Hisy anio ny fotoana natokana hampanenoana anjomara sy kiririoka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara tsy hankasitrahana ny tsy fandriampahalemana.
Kidnapping teny Androndra Nampijalijaliana, nariana tany Marovoay izy mirahalahy
Zazalahy roa dia i Thinot sy Tiavina samy vao 17 taona monja no indray nisy naka an-keriny teny Androndra ny talata lasa teo.
Maorisy Tsy mety miala ny filoha
Namoaka fanambarana omaly alarobia ny fiadidiana ny repoblika Maorisinina fa tsy mieritreritra ny hametra-pialana izany mihitsy ny filoha Ameenah Gurib-Fakim.
Ady amin’ny hanoanana Amin’ny 2030 mifankahita
Notontosaina omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny toekarena etsy Anosy ny atrikasa hanafoanana tanteraka ny hanoanana eto Madagasikara amin’ny taona 2030 na ilay tetikasa « Faim zero ».
Fitrandrahana solika mavesatra any Tsimiroro Nikatso ny famokarana
Manankarena tokoa i Madagasikara. Solika maherin`ny 2 lavitrisa barila no tahiry ao ambanin`ny tany.